प्रजातन्त्रपछि सडकबाट दरबारबिरुद्ध धावा बोल्ने पहिलो नेता स्व. अधिकारी – Nepal Japan
नेपाल जापान १५ फाल्गुन १४:१०
मुलुकले आशा गरेका नेता थिए रवीन्द्र अधिकारी आज हामीमाझ हुनुहुन्न । संसदीय अभ्यासमा लामो समय बिताएर खारिएको अनुभवसहित मन्त्री बन्नुभएका अधिकारीको २०७५ साल फागुन १५ गते हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भयो । काठमाडौंबाट तेह्रथुमको चुहानडाँडामा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पुगेको मन्त्री अधिकारीसहितको टोली कार्यक्रम सकेर पाथीभरा हुँदै काठमाडौं फर्किने क्रममा फागुन १५ गते ताप्लेजुङको दारेभीरमा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको थियो । आज (फागुन १५) उहाँको दोस्रो स्मृति दिवस सुरुमै स्व. अधिकारीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आलेख अघि बढाउने अनुमति चाहें पाठकहरुसंग ।
विकास, समृद्धि र सुशासन अनि पारदर्शितामा दत्तचित्त अधिकारी आफूमाथिका आरोपहरुका खण्डन मण्डन गर्दै हिंड्ने हैन कि कामबाटै त्यसको उत्तर दिने स्वाभावको हुनुहुन्थ्यो । उहाँ एउटा हँसिलो विद्रोही, शान्त क्रान्तिकारी भएकैले होला सबै दलका कार्यकर्ताका लागि उहाँ प्रिय नेता हुनुन्थ्यो । यसो भन्नुको कारण अनेक छन् । विद्रोहको अर्थ हतियार उठाउनु मात्र हैन । अनि क्रान्ति भनेको रक्तवहाव मात्र पनि हैन । जनताको मानसिकता परिवर्तन, देशको स्थितिमा सुधार र जनतालाई समृद्धिको मार्गमा डोर्याउनु नै क्रान्ति हो । त्यो क्रान्तिको मार्गमा दत्तचित्त भएर लागिपर्ने अभियन्ता ‘विद्रोही’ हो– जो राज्यमा कायम रहेका विकृति, विसंगति र कुप्रथाकाबिरुद्ध एक्लै भए पनि लडिरहन्छ, आफ्ना भनाइहरु, आफ्ना सोच र योजना जनतामा निरन्तर प्रवाह गरिरहन्छ शान्तिपूर्ण रुपमा ।
स्व. अधिकारी यस्तै स्वाभावका हुनुहुन्थ्यो । अन्याय बिरुद्ध उहाँ जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार हुनुहुन्थ्यो । यसको एक होइन अनेक उदाहरण छन् । दरबारबिरुद्ध खुला रुपमा धावा बोल्ने खुला राजनीतिका पहिलो नेता अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले कहिल्यै त्यसको ब्याज खोज्नुभएन । आन्दोलनका बेला टाउका फुटेका फोटा देखाएर लाभ लिनेहरुको भीडमा दरबारबिरुद्ध ५ लाखको हस्ताक्षर संकलन गरेर बुझाउने अधिकारीले त्यसलाई मात्र आफ्नो कर्तव्य सम्झनुभयो । मेरो बुझाइमा एउटा नेतामा हुनुपर्ने गुण यही हो ।
मुलुक ऐतिहासिक मोडमा थियो, पहिलोपटक संविधानसभाबाट जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाउने मौका पाएका थिए । तर राजनीतिक दलका नेताहरुबीच विवादका चाङ थिए । संविधान बनाउने संविधानसभा भत्ता पचाउनेहरुको भीड सावित बनेको थियो । तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति गरेर संविधान बनाउने प्रयास चलिरहेको थियो । तैपनि सहमति हुन सकेको थिएन । २ वर्षका लागि निर्वाचित भएको संविधानसभा पटकपटक गरी थप दुई वर्ष थपियो । तर थपिएको दुई वर्षमा पनि संविधान बन्ने छाँटकाट थिएन ।
एकदिन अधिकारीसंग भेट भयो– भेटको सुरुमै “दाइ संविधान त नबन्ने भयो नि ! के गरेका होलान ?” २०६८ सालको कुरा हो यो ? मेरो जिज्ञासामा उहाँको उत्तर थियो– “संविधान नबनाएर सुख पाइन्छ ? हामी कुनै हालतमा त्यसो हुन दिन्नौं ! यसका लागि हामी लागिरहेका छौं । तपाई निराश नबन्नुस् !”
हुन पनि उहाँ राजनीति मात्र मुलुकको स्थिरता र विकासका लागि हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ हुनुहुन्थ्यो । पार्टीका शीर्ष नेताहरु संविधानका विषयवस्तुमा विवाद झिकेर बसिरहेका बेला मुख्य पार्टीका युवा सांसदहरु समूहगत रुपमै दवाव सिर्जना गर्न सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँहरुको अभियान असफल भयो २०६९ सालमा ऐतिहासिक संविधानसभा विघटन भयो र तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराउने गरी ।
स्व. अधिकारी विकासप्रेमीका रुपमा परिचित र देशले आश गरेका नेता हुनुहुन्थ्यो त्यसैले त उहाँ कास्कीबाट तीनपटक लगातार निर्वाचित हुनुभयो । उहाँले निर्वाचन क्षेत्रसंगै सिंगो देशको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्नुभयो । राजनीतिलाई विकासको बहसमा उतार्नुभयो । समृद्धि कसरी हाँसिल गर्ने भन्नेमा गहन अध्ययन गर्नुभयो । सयौं लेख प्रकाशित गर्नुभयो र ‘समृद्ध नेपाल’ पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभयो ।
अधिकारीको त्यो पुस्तक मुलुकको विकास कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र हो । एक किसिमले भन्ने हो भने राष्ट्रिय योजनाको खाका नै भन्दा फरक नपर्ला । तर अधिकारीले आफ्नो सपना पूरा गर्न पाउनुभएन । नियतिको कठोर खेलले हामीबाट उहाँलाई चुँडेर लग्यो । आज सम्झदा मन भक्कानिएर आउँछ ।
उहाँसंगको स्मरणहरु अनगिन्ती छन् । विशेषतः हामीबीच कुनै राजनीतिक दलका बारेमा कहिल्यै कुरा भएन । मात्र मुलुकको समृद्धिमा कुरा हुन्थ्यो । काम गर्ने चाहनामा आउने अबरोधहरु कसरी चिर्ने भन्ने बहस हुन्थ्यो । कास्की क्षेत्र नं. २ बाट पछिल्लोपटक निर्वाचित भएपछि उहाँ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बन्नुभयो । छोटो कार्यकालमा उहाँले पर्यटन र नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा कीर्तिमानी काम गर्नुभयो । यति भन्न मलाई कुनै गाह्रो पर्दैन । सरकारका कामका बारेमा विपक्षी दलले चर्को आलोचना गरिरहेका बेला विपक्षी दलकै नेताले सार्वजनिक संचार माध्यमबाटै अधिकारीको कामको प्रशंसा गरेका थिए । यही गुण थियो स्व. अधिकारीमा ।
आलोचन भगवानको पनि हुन्छ ! अधिकारी आलोचनाबाट मुक्त हुनुभएन । विशेष गरी वाइडबडी काण्डमा उहाँलाई नियोजित रुपमा मुछियो– यो मेरो ठम्याई मात्र हैन प्रमाणहरुले पनि बताइसके । उहाँले यस विषयमा संसददेखि संचार माध्यमसम्म प्रष्टिकरण दिनुभयो । तर निरन्तर प्रहार भैरह्यो । अन्ततः यसको गहिराइमा पुगेर विवरणहरु सार्वजनिक हुन थालेपछि यो मुद्दा नै सेलायो ! तर अधिकारी “न बिराउनु नडराउनु’को शैलीमा जीवनको अन्तिम क्षणसम्म लागिपर्नुभयो । उहाँको यही लगनशीलताले सबैलाई कायल बनाउँछ ।
एउटा राजनेताको गुण बोकेका अधिकारीको अकल्पनीय निधन सिंगो देशका लागि ठूलो क्षति हो । विकास र समृद्धिको नारा बोकेर राजनीतिमा होमिनुभएका अधिकारीको स्मृतिमा ‘रवीन्द्र अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान’ गठन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन भएको यो प्रतिष्ठानले अधिकारीको दोस्रो स्मृतिदिवस मनाउँदैछ ।
स्व. अधिकारीको सपना, योजना, चाहना पूरा गर्ने अभिभारा अहिले प्रतिष्ठानमा छ । प्रतिष्ठानले उहाँका योगदानहरु जीवित राख्दै, उहाँले समृद्धि र विकासका लागि दिनुभएको योगदान र चाल्नुभएका कदमहरु जीवन्त राख्दै समाज रुपान्तरणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुको परम कर्तव्य हो ।